Ny Factory Price Glass Defogging Heating Film China Manufacturer
Description:Toeram-panafody ho an'ny fitaratra,Fanimbana fanasan-damba mafana,Demister for Glass
Home > Products > Home Appliance Heating Film > Mirror Heating Elements > Ny Factory Price Glass Defogging Heating Film
Model No.: XHC-F009B-3
Io sarimihetsika fanaraha-maso io dia tena tsara ho an'ny fanodinana an-tsarimihetsika, anisan'izany ny fitaratra fitaratra, fiara fitaratra fanodinana fiara, sns.
Manome anao ny kalitao avo lenta, ny fametrahana tsotra sy ny fampiasana ny fitaovana fanalefahana mora foana. Ireo trano fanatodizany dia ambany, tsy miovaova, na dia ny mari-pamindrana tanimanga izay mahatonga ny fitaratra ho mazava sy azo antoka ho ampiasaina. Ny sarimihetsika fijerena hafanana hafahafa dia tena maharitra ary mampiasa faran'izay kely kokoa ny teknolojia nentin-drazana. Ny vokatra avo lenta sy ny fifaninanana amin'ny vokatray dia mahatonga antsika ho mpiara-miombon'antoka amin'ireo mpamatsy marika malaza eran-tany, toy ny Samsung, LG, Simfer, Kohler, Panasonic, BROAN, etc.Quality dia azo antoka tanteraka. Ny tetikasa OEM dia raisina.
2. Birao fiampitàna Ny fanontam-pirinty aza, dia tsy afaka ny hanamaivana ny tranga tsy misy
3. Miaraka an -tsokosoko ( DS-80LG )
6. Ambony c oated amin'ny plastika 0.125 PET Pre-coating film , dia tokony hosoloina ny taratasy fanentanana mivantana amin'ny dika mitovy roa
5, Discounts dia atolotra miorina amin'ny habetsahanao .
Toeram-panafody ho an'ny fitaratra Fanimbana fanasan-damba mafana Demister for Glass Toeram-panafody mitam-pamonjena ho an'ny fahantrana Toeram-pandehanana ho an'ny tongotra Toeram-pandehan'ny tavy Toeram-pandehan'ny raozy Toeram-pandehan'ny kiraro manify